Mogadishu Journal » 2021 » February » 20
Nasiib xumadii Liverpool ee dhaawacyadii daafaca ayaa sii socday iyadoo kabtanka Jordan Henderson uu soo gaaray dhibaato gumaarka ah oo muuqata kulankii Everton. Jordan Henderson ayaa dhaawac muruqa ah oo gumaarka ah ka soo gaadhay kulankii Merseyside Derby iyada oo ay wali sii...
Security forces crack down on anti-coup demonstrators in Mandalay, prompting condemnation by the EU which calls meeting to discuss response. 20 Feb 2021 At least two people have been killed and several wounded in Myanmar’s second city of Mandalay when security forces opened fire...
Muqdisho:-Sarkaal ka tirsanaa ciidamada Booliska Somalia ayaa caawa lagu dilay agagaarka taalada daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in sarkaalka ay dileen ciidamo ka tirsan Nabad sugida Somalia, xili uu marayey nawaaxiga taalada daljirka dahsoon, welina...
Madaxweynihii 3aad ee dowlad goboleedyada oo Muqdisho soo gaaray (Sawirro)
Muqdisho:-Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-qoor) iyo wefdi uu hogaaminayo ayaa caawa maqribkii soo gaaray magaalada Muqdisho. Qoor-qoor ayaa qeyb-galaya shirka Madaxda dowlada Federaalka, dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee looga Hadlayo Arrimaha...
Maxay ka wada hadleen Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo Xassan Shiikh? (Sawirro)
Muqdisho:-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa galabta hoygiisa Magaalada Muqdisho ku booqday Madaxweynihii hore ee Dalka Xassan Sheikh Mohamud oo sidoo kale ka tirsan midowga musharaxiinta. Inkastoo aan faahfaahin laga bixin kulanka labada...
Dowlada Somalia oo shaacisay dadkii ugu badnaa ee laga helay Coronavirus
Muqdisho:-Wasaaradda Caafimaadka Somalia ayaa sheegtay in 24kii saacaood ee la soo dhaafay laga helay cudurka Coronavirus dad gaaraya 257 qof, tiradaasoo ah tii ugu badneyd ee Wasaaradu shaaciso tan iyo intii cudurku soo galay dalka. “Maanta sabti ah waxaa cudurka laga helay dad...
Imaaraadka Carabta oo War kulul kasoo saartay Xiisada kasoo cusboonaatay Muqdisho
Dowlada Imaaraadka Carabta ayaa walaac xoogan ka muujisay rabshadaha kasoo cusboonaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan weerarkii lagu qaaday dibad baxayaal ay horkacayeen qaar kamid ah musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga...
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres, ayaa walaac xoogan ka muujiyay rabshadihii gacan ka hadal ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qeybo kamid ah magaalada Muqdisho Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku hayo siyaasadda Soomaaliya inay ku...
Wararkii Ugu Dambeeyay xaalada magaalada Muqdisho iyo Cabsi wali jirta
Muqdisho:-Waxaa saakay degan xaalada Magaalada Muqdisho oo shalay ka dhaceen rabshado iyo is rasaaseyn dhax martay ciidamo kala taabacsan Madaxtooyada Soomaaliya iyo Midowga Musharaxiinta . Xaalada Muqdisho ayaana saaka u muuqata mid wax badan ka duwan sida ay aheyd shalay oo...
Midowga Musharaxiinta oo War soo saaray kuna hanjabay in Banaan baxayada sii wadayaan
Muqdisho:-Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen ku canbaareeyeen gaboodfalo ay sheegeen in ay kula kaceen dowlada uu hogaamiyo Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo. Waxa ay sheegeen Musharaxiinta in si sharci daro ah lagu...
Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Madaxtooyada ayaa lagu wadaa in uu ka furmo shir mar kale looga hadlayo khilaafka ka taagan arimaha doorashada dalka, kaa oo ay yeelanayaan Madaxda Dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkan uu iclaamiyay Madaxweynaha Waqtigiisa...